ip address can't change - MYSTERY ZILLION
ip address can't change
June 2008 edited July 2008 in Other
ကျနော့်ဆီက စက်တလုံးမှာ ip address ပြောင်းမရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ
ဖြစ်ပုံက Local Area Connection > Properties > Internet Protocol (TCP/IP) > Properties ကို ပြောင်းလို့ရတယ်။ ပြောင်းပြီးပိတ်လိုက်ရော ... ပြန်ဖွင့်ကြည့်ရင် အားလုံးမူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်။
အဲဒါဘယ်လို ဖြေရှင်းလို့ရမလဲ တချက်လောက် ကူညီနို်င်မလားဗျာ
နောက်ပြီး အဲဒီစက်က network ထဲက ကွန်ပြူတာတွေကိုတော့တွေ့တယ်။ အင်တာနက်တော့ မရဘူး။ အဲဒါလေးလည်း ရချင်ပါသည်။
ကိုစေတန်က ဂူဂဲမှာ အရင်ရှာလို့ပြောထားတယ်နော် .. ဟင်းလူကြီး:14:
ကိုဇူလူးကြီးမေးတာကို ပြန်မေးမယ်ဗျာ . . . IP address ကိုပြောင်းပြောင်းချင်းမှာ ပြောင်းလို့ရသွားလား။ အင်တာနက်က ဘာလို့ချိတ်မရတာလဲ။ IP address မှားနေလို့ချိတ်မရတာလား။ ကျွန်တော်တော့ တစ်ခါဖြစ်ဘူးတယ်။ မှားပြီး .bat ဖိုင်တစ်ခုကို run လိုက်တာ အင်တာနက်ချိတ်မရတော့ဘူး။ ကျွန်တော့ IP address ကပြောင်းသွားတော့ sever ကလှမ်းချိတ်တာ လက်မခံဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ error 800 ဆိုပြီးချိတ်မရတော့ဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ ip address ပြင်လိုက်တာ ပြန်အဆင်ပြေသွားတယ်။ ကိုဇူးလူးကြီးကရော ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ မသိဘူး။ သေချာပြန်ပြောပြပါဦး။ ဒါမှ သိတဲ့လူတွေ ဖော အဲလေ ပြောပြနိုင်မှာပေါ့ . . . :1:
ခင်မင်လျှက် . . .
ကိုဒီဘီအေ လူဆိုး ... ဂျောက်တွန်းဖို့ချောင်းနေတာကြာပလား
ဂူးဂဲနဲ့ ယာဟူးအန်စာမှာ မေးပြီးပြီ။ ကျနော့်မေးခွန်းကဘဲ မရှင်းတာလားမသိ။ အဲလိုအဖြေကို မတွေ့ဘူး။
အခုဖြစ်ပုံက ဒီလိုဗျ ကိုရဲမာန်
ip address ပြောင်းပြောင်းချင်းမှာပြောင်းလို့ရတယ်။
ပြီးတော့ ပြန်ဖွင့်ကြည့် နဂိုအတိုင်း (မပြောင်းရသေးခင်အတိုင်း) ပြန်ဖြစ်နေရော။
ပြောင်းလို့ရသွားတဲ့ပုံ (ပြောင်းလို့ရပေမယ့် ပိတ်ပြီးနောက် ပြန်ဖွင့်ရင် မူရင်းအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားရော)
အင်တာနက်ချိတ်လို့ရတဲ့စက်မှာ cmd > ping ရိုက်ရင် 209.131.36.158 နဲ့လာတယ်။
အခု အင်တာနက်မရတဲ့စက်မှာကျတော့ 1.0.0.0 နဲ့လာတယ်။ အဲဒါကြောင့်များလား ... စဉ်းစားပေးကြပါအုံးဗျာ
ADSL network တခုထဲမှာစမ်းကြည့်တာ အဲလိုဖြစ်နေတယ်။ ကူညီမယ့် သိကြားမင်းကြီးကို စောင့်နေပါသည်ခင်ဗျား
(စက်တွေဂေါက်တာများလို့ လူလည်း နည်းနည်းဂေါက်နေပြီဖြစ်တဲ့ ... )
ipconfig /all နဲ့
ဒီလိုလေး နဲနဲ စမ်းကြည့်ရင်ရော ..ပထမဆုံး ကိုယ့်ရဲ့ manual အိုင်ပီတွေကို မှတ်ထားပေါ့
...ipconfig/relese ဆိုပြီး အိုက်ပီကို ဖြုပ်ကြည့်ပါလား
ပြီးတော့ . ပြန်ထည့်ကြည့်လေ....
spy emergency 2008 နဲ့ ဆော်ထည့်လိုက်တာ အကုန်လုံးအိုကေသွားတယ်။
အခုတော့ ကျနော့်ဆီကစက်တွေမှာ spy emergency 2008, kis7 ထည့်ထားတယ်။
နောက်တော့ Deep Freeze ကို Drive-C အတွက်ဘဲ အလုပ်လုပ်ဖို့ command ပေးထားလိုက်တယ်။
ဒီလောက်ဆို အုန်းခင် အဲလေ အိုခေမယ်တော့ ထင်ပါသည်ခင်ဗျား